Sida Loogu Abuuro Luuqadaada Midka Turjubaanka Nidaamka Morse | Qalabka bilaashka ah
Maanta waxaan la laabaneynaa mid ka mid ah casharradeenii xiisaha badnaa. Markan waxaan rabaa inaan ku tuso mashruuc aad u fudud oo kugu qaadan doona waqti gaaban inaad ku hirgaliso oo aad si macno leh ugu dhisi doonto nooc tarjumaan ah luqad ku qoran Morse code. Sidii caadada u ahayd, runtu waxay tahay inaanaan dhaafi doonin mashruuc halka a saxanka roodhida iyo a guddiga arduino Maaddaama, haddii aad rabto inaad sii wado, labadaba heerka software-ka iyo marka la eego dhammaystirka mashruuca ugu dambeeya, waa inaad noqotaa midka fuliya xalka, ka yar, soo jiidashada leh.
Fikraddu waxay ka bilaabmaysaa abuuritaanka a tarjumaan nooc kasta oo font ah, ereyo ama weedh ah oo loo yaqaan morse code. Tani way fududahay sida loo adeegsado loox Arduino ah kaas oo noqon doona midka leh softiweerka lagama maarmaanka u ah si markaa, iyada oo loo marayo wax soo saarkiisa, aan ka dhigi karno dhowr LED oo eegno macnaha ku jira luqadda Morse ee aan muujineyno. Si aan si fudud ugu qorno qoraalka aan doonayno inaan turjunno, waxaan adeegsan doonaa taleefanka gacanta oo ku qalabaysan nidaamka hawlgalka Android kaas oo qoraalka ku soo diri doona xiriirka bluetooth-ga guddigayaga. Arduino UNO.
1 Waxyaabaha loo baahan yahay in lagu fuliyo mashruuca
2 Talaabooyinka lagu fulinayo mashruuca
3 Xiriirka ka dhexeeya guddiga Arduino iyo kumbuyuutarka
Waxyaabaha loo baahan yahay in lagu fuliyo mashruuca
Maaddaama aan inbadan ama kayar isku daynay inaan ku muujino khadadka sare, si aan u fulino mashruucan waxaan u baahan doonaa waxyaabo gaar ah inkasta oo, haddii aad jeceshahay adduunka gaare, Waan hubaa in ama aysan kugu adkaan doonin inaad hesho waxa kaa maqan mid ka mid ah dukaamadaaga ugu badan hadday dhacdo inaadan haysan, in kastoo, sidaan idhi, iyagu badanaa alaabada si caadi ah loo isticmaalo. Gaar ahaan, waxaan u baahan doonaa liiska soo socda:
Bluetooth loogu talagalay Arduino
Afar nalalka LED-ka ah, 3 isku midab ah iyo nalka afraad oo midab kale ah
Dhowr fiilooyin si loo fududeeyo isku xirnaanta aaladaha, kiiskan si loogu xiro sabuuradda iyo kontoroolkeena Arduino
Fiilo isku xidha Ardunio iyo galinta USB si aad u soo dejiso barnaamijka
Kumbuyuutar leh Arduino IDE si sax ah loogu rakibay iyo Xiriirinta USB si loo xiro guddiga
Qalabka mobilada leh nidaamka hawlgalka Android 2.2.1 ama ka sareeya
Markaan helno dhamaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee la heli karo, waxaan ku sii wadi karnaa fulinta mashruuca. Hal qodob oo maskaxda lagu hayo waa kan macno ahaan looma baahna in la helo adabtarada loo yaqaan 'Bluetooth' ee loo isticmaalo mashruucan ama kaarka Arduino UNO sida tan maadaama wixii kale ee leh xiriiryada aasaasiga ah la isticmaali karo, waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan fiiro gaar ah u yeelano isku xirnaanta la adeegsaday si, tusaale ahaan, haddii ay dhacdo wax soo saar dijitaal ah 13 ka mid ah Arduino UNO tani waxay u dhigantaa isla soosaarka guddiga aad isticmaaleyso.
Talaabooyinka lagu fulinayo mashruuca
Si loo fuliyo mashruucan, hoosta, waxaan ku tilmaami doonaa talaabooyin taxane ah oo laxiriira isku imaatinka iyo iskuxirka dhamaan walxaha ka kooban liiskii hore ee ay ahayd inaan raacno fulintooda saxda ah. Sida had iyo jeer dhacda mashruucan oo kale, waxaad xor u tahay inaad xor u tahay wax ka beddel khad kasta oo koodh ah ama ku dar qalab si aad u kobciso oo xitaa u dhammaystirto hawlgalkeeda mar haddii nooc kasta oo horumar ah mar walba la soo dhaweynayo.
Marka ugu horeysa waxaan fulin doonnaa xiriirinta Arduino UNO weelkeena rootiga. Gaar ahaan, wax soo saarka la isticmaalay wuxuu noqon doonaa GND iyo 3.3 V. Khadadkan isku midka ah ayaa noo adeegi doona, iyo waxyaabo kale, si aan awood ugu siino adabtaradeena Bluetooth.
Mar alla markii aan xiriiriyadan sameynay, waxaa la joogaa waqtigii la isku duwo lahaa soo-gelinta xogta iyo soo-saarista adabtarada 'bluetooth' oo ay la socoto galka xogta dhijitaalka ah iyo wax soo saarka guddiga Arduino. Sidan oo kale waxaan ku heli doonnaa adabtaradeena si dhammaystiran ugu xiran kaarka si labadaba ay u helaan hadda iyo si markaa gebi ahaanba loo helo heer farsamo si loo bilaabodhageyso'xogta ka soo gaadha dekedaha laga soo galo ee Arduino UNO. Faahfaahin ahaan, waxaan kuu sheegayaa in munaasabadaha qaarkood, kaarka aan isticmaalno iyo adabtarada Bluetooth-ka ah awgood, isku xirnaanta la adeegsaday way kala duwanaan kartaa sidaa darteed, xilligan, waxa ugu fiican ayaa ah fiiri dukumiintiyada rakibaadda adabtarada maadaama ay badanaa la socdaan jaantusyo isku xira.
Waxaan imaanay 3 isku xidhka geeska. Tan waxaan u isticmaali doonaa nambarka soo saarista dhijitaalka 13 ee Arduino UNO. Xiriirka haray, sida caadiga ah, waa inaan kuxirnaa GND ama dhulka si howlgalka geeska uu sax u yahay.
Hadda ayaa la joogaa wakhtigii isku xiraan Laydhka kala duwan. Si aanad isugu dayin inaad khalkhal gasho, kuu sheeg in fikraddu tahay in lagu xiro lugta ugu dheer, mid togan, mid ka mid ah wax soo saarka dijitaalka ah Arduino UNO halka midka gaaban uu si toos ah ugu xirmo GND ama dhulka. Sidan ayaan ku ogaan karnaa in tan ugu horeysa ee LED-yada cagaaran ay ku xirnaan doonaan wax soo saarka dhijitaalka ah ee 12, tan xigta ee soo saarista 8, tan saddexaad ee cagaaran ee soo saarida 7 halka midka kaliya ee buluuga ah uu ku xirnaan doono wax soo saarka digital 4.
Tallaabada ugu dambeysa, markii aan wada diyaarinno fiilooyinka oo dhan waa isticmaal fiilada isku xirka USB-ga si aad noogu xirto Arduino UNO kumbuyuutarka oo markaa aan awoodno inaan ku qalabeyno software-ka lagama maarmaanka ah, oo aan qori doonno oo ka soo ururin doonno Arduino IDE lafteeda.
Xiriirka ka dhexeeya guddiga Arduino iyo kumbuyuutarka
Hal qodob oo ay tahay in lagu xisaabtamo marka aan leenahay guddiga ku xiran kumbuyuutarka si aan u ogaano in wax walba ay si sax ah u shaqeeyaan, ugu yaraan mabda 'ahaan, in guddiga uu yeelan doono iftiinka cagaaran markasta ilaa iyo inta uu ku xirmayo kumbuyuutarka. Dhinaca kale waxayna kuxirantahay adabtarada Bluetooth-ka ee aan adeegsano, tan sida caadiga ah wuxuu leeyahay nal guduudan oo dhalaalaya sababo la xiriira xiriir aan lagu dhisin aaladda Android in aan u isticmaali doono inaan ugu dirno xarfaha, jumladaha ama ereyada saxanka.
Waan ogahay in faahfaahinta kor ku xusan ay umuuqato wax aad u 'tonto'laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa inay yihiin kuwo sax ah, lagama maarmaan ah iyo gaar ahaan tilmaamo xiiso leh haddii aan tixgelinno inay ka mid yihiin bulshada wax soo saaray. dadka bilaabaya iyo in, mahadsanid kuwaan yaryar 'tabaha'Way fahmi karaan taas, ugu yaraan, hadda wuxuu gaarayaa adabtarada iyo guddiga laftiisa labadaba.
Waqtigan xaadirka ah waa inaan soo degsano codsiga MORSE.apk ku lifaaqan Codsigan waa in lagu rakibaa qalabkaaga mobilada oo ku qalabaysan nidaamka hawlgalka Android. Marka la rakibo, waa inaad furataa arjiga oo aad sii wadtaa saxaafadda. Markan ikhtiyaarka sida aadka ah noo xiiseeya ayaa ah 'Qor Qoraal', isla taas oo ah inaan ku riixno si aan uga helno. Marka aan gudaha soo galno waa inaan gujino 'Connect' si aan u dhisno xiriirka saxankayaga.
Habka loo dejiyo ee la raacay waa sida soo socota.
Markaad ka soo gasho arjiga qalabkaaga Android oo aad raacdo talaabooyinkii hore, waxaad awoodi doontaa inaad qorto warqad, eray ama weedh kasta. Markaad qorto waxaad rabto, kaliya waa inaad gujisaa dirista.
Haddii qoraalka si sax ah loo helay nidaamku wuxuu si otomaatig ah u daarayaa laydhadhka isla markaana soo saarayaa dhawaaq
Fikradda ayaa ah in iftiinka cagaaran ee ugu horreeya uu sii socon doono oo uu sii socon doono si loo ogaado 'barta'. Dhanka kale, geeska ayaa yeeri doona isla markaana dami doona isla waqtigaas.
Nalalka labaad iyo saddexaad ee cagaaran ayaa daari doona oo dami doona si loo ogaado 'khadka' markiisa. Geesku, sidii kiiskii hore, isla mar buu daari doonaa oo demin doonaa.
Ugu dambeyntiina iftiinka afraad, waa, iftiinka buluugga ah, wuu shidi doonaa oo dansan doonaa si loo go'aamiyo dhammaadka dabeecadda, erayga ama oraahda. Markay nooc uun u dhexeyso dabeecad kasta, eray ama weedh kasta, nalkaani wuu daarmayaa oo deminayaa laba jeer.
Maaddaama ay yihiin tixgelinno, kaliya ayaa kuu sheegaya in xaaladdan oo ah barnaamijka Android lagu sameeyay mahadnaqa App Inventor, hab aad u fudud oo lagu soo saaro koodhka iyo naqshadeynta arjiga ee mar dambe lagu maamuli doono qalab lagu qalabeeyay nidaamka ay abuureen injineerada Google.
Macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahin: tilmaamo
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Abuur luqaddaada si aad uhesho turjubaan koodh ah
3 siyaabood oo loo dhiso kamarad basaas bilaash ah